एक साँझ, पत्रुस लगायत धेरै जना चेलाहरू येशूसँगै माछा मार्ने डुङ्गामा थिए, र पत्रुसले येशूलाई अत्यन्तै मूर्ख प्रश्‍न सोधे: “प्रभु! म तपाईंलाई एउटा प्रश्‍न सोध्‍न चाहन्छु जुन प्रश्‍न मसँग धेरै समयदेखि रहेको छ।” येशूले भन्‍नुभयो: “त्यसो भए प्रश्‍न के हो भन्!” त्यसपछि पत्रुसले भने: “के व्यवस्थाको युगमा गरिएको काम तपाईंले गर्नुभएको काम हो?” येशू मुस्कुराउनुभयो, मानौं उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो: “यो बच्‍चा, ऊ कति मूर्ख छ!” त्यसपछि उहाँले दृढताका साथ भन्नुभयो: “यो काम मेरो थिएन। यो यहोवा र मोशाले गर्नुभएको काम थियो।” पत्रुसले यो कुरा सुने र अचम्‍म मान्दै भने: “अहो! त्यसो भए यो तपाईंको काम थिएन।” पत्रुसले यसो भनिसकेपछि, येशूले फेरि बोल्‍नुभएन। पत्रुसले मनमनै विचार गरे: “यो काम गर्ने तपाईं हुनुहुन्‍नथियो, त्यसैले अचम्म के लाग्नु तपाईं व्यवस्थालाई नष्ट गर्न आउनुभएको त हो, किनभने यो तपाईंको काम होइन।” तिनको हृदय पनि सहज भयो। त्यसपछि, येशूले पत्रुस अलिक अनुभवहीन छन् भन्‍ने कुरा महसुस गर्नुभयो, तर त्यो बेला तिनमा त्यति बुझाइ नभएको हुनाले, येशूले अरू केही भन्‍ने वा तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा खण्डन गर्ने गर्नुभएन। एक पटक येशूले सभाघरमा प्रवचन दिनुभयो जहाँ पत्रुस लगायत धेरै मानिसहरू थिए। आफ्‍नो प्रवचनमा, येशूले भन्‍नुभयो: “अनन्‍तदेखि अनन्‍तसम्‍म आउनुहुने एकमात्र उहाँ नै पापबाट सारा मानवजातिलाई छुटकारा दिनको लागि अनुग्रहको युगमा उद्धारको कार्य गर्न आउनुहुनेछ, तर मानिसलाई पापबाट निकाल्‍ने क्रममा उहाँ कुनै पनि नियमद्वारा बाँधिनुहुनेछैन। उहाँ व्यवस्थाबाट बाहिर निस्केर अनुग्रहको युगमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। उहाँले सारा मानवजातिलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। उहाँ व्यवस्थाको युगबाट अनुग्रहको युगमा जानुहुनेछ, तैपनि उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैनन्, उहाँलाई जो यहोवाबाट आउनुभएको थियो। मोशाले गरेको काम यहोवाले दिनुभएको काम थियो; यहोवाले गर्नुभएको कामको कारण मोशाले व्यवस्थाको खाका तयार गरे।” यसो भन्‍नुभएपछि, उहाँले आफ्‍नो कुरालाई जारी राख्‍नुभयो: “अनुग्रहको युगमा अनुग्रहको युगका आज्ञाहरूलाई हटाउनेहरूले संकटको सामना गर्नेछन्। तिनीहरूले मन्दिरमा खडा भएर परमेश्‍वरको विनाश प्राप्त गर्नुपर्नेछ, र तिनीहरूमाथि आगो आइपर्नेछ।” यी वचनहरू सुनेपछि यसले पत्रुसमा केही प्रभाव पार्‍यो, र आफ्‍नो अनुभवको अवधिभरि, येशूले पत्रुससँग हृदय खोलेर कुरा गर्दै तिनको गोठाला र रखवारी गर्नुभयो, जसले पत्रुसलाई येशूको बारेमा अलिक राम्रो बुझाइ प्रदान गर्‍यो। त्यो दिन येशूले जे प्रचार गर्नुभएको थियो सो कुरा अनि माछा मार्ने डुङ्गामा हुँदा तिनले येशूलाई गरेको प्रश्‍न, येशूले दिनुभएको जबाफ र साथसाथै उहाँ जसरी मुस्कुराउनुभएको थियो त्यसको बारेमा विचार गर्ने क्रममा, पत्रुसले आखिरमा यी सबै कुराको बारेमा बुझे। त्यसपछि, पवित्र आत्माले पत्रुसलाई अन्तर्दृष्टि दिनुभयो, त्यसपछि मात्रै तिनले येशू जीवित परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर बुझे। पत्रुसको बुझाइ पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिद्वारा आयो, तर तिनको बुझाइमा एउटा प्रक्रिया थियो। प्रश्‍नहरू गरेर, येशूको प्रचारलाई सुनेर, त्यसपछि येशूको विशेष सङ्गति र उहाँको विशेष गोठालोपनलाई प्राप्त गरेर, येशू जीवित परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई पत्रुसले महसुस गर्न पुगे। यो एकै रातमा प्राप्त गरिएको थिएन; यो एउटा प्रक्रिया थियो, र तिनको पछिका अनुभवहरूमा यो तिनको लागि सहयोग बनेको थियो। किन येशूले अरू मानिसहरूमा सिद्धताको काम गर्नुभएन, तर पत्रुसमा मात्रै गर्नुभयो? किनभने येशू जीवित परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई पत्रुसले मात्रै बुझेका थिए; अरू कसैले पनि यो कुरा जानेका थिएनन्। उहाँलाई पछ्याउँदाको समयमा धेरै कुरा जान्‍ने धेरै चेलाहरू थिए, तैपनि तिनीहरूको ज्ञान सतही थियो। यही कारणले गर्दा सिद्ध तुल्याइएको नमुनाको रूपमा येशूले पत्रुसलाई चुन्‍नुभयो। येशूले पत्रुसलाई त्यतिबेला जे भन्‍नुभयो उहाँले आज मानिसहरूलाई त्यही भन्‍नुहुन्छ, तिनीहरूको ज्ञान र जीवन प्रवेश पत्रुसकै स्तरमा पुग्‍नुपर्छ। यही मापदण्ड र यो मार्गअनुसार परमेश्‍वरले सबैलाई सिद्ध तुल्याउनुहुनेछ। किन आजका मानिसहरूमा वास्तविक विश्‍वास र साँचो प्रेम हुनुपर्छ? पत्रुसले जे अनुभव गरे त्यो तिमीहरूले पनि अनुभव गर्नुपर्छ; पत्रुसले आफ्‍नो अनुभवहरूद्वारा प्राप्त गरेका फलहरू तिमीहरूमा पनि प्रकट हुनुपर्छ; र पत्रुसले अनुभव गरेको पीडालाई तिमीहरूले पनि अनुभव गर्नपर्छ। तिमीहरू हिँड्ने बाटो पत्रुसले हिँडेकै बाटो हो। तिमीहरूले सहने पीडा पत्रुसले सहेकै पीडा हो। जब तिमीहरूले महिमा प्राप्त गर्छौ र जब तिमीहरूले वास्तविक जीवन जिउँछौ, तब तिमीहरू पत्रुसको स्वरूपमा जिउनेछौ। मार्ग एउटै हो, र यसलाई पछ्याएर व्यक्ति सिद्ध हुन्छ। तैपनि, पत्रुसको तुलनामा तिमीहरूको क्षमतामा कमी छ, किनभने समय परिवर्तन भएको छ, र त्यसरी नै मानिसको भ्रष्टताको हद पनि परिवर्तन भएको छ, किनभने यहूदिया प्राचीन संस्कृतिमा लामो समयदेखि रहेको राज्य थियो। त्यसकारण, आफ्‍नो क्षमता बढाउनको लागि तिमीहरूले आफूले सक्‍नेजति सबै गर्नुपर्छ।
पत्रुस समझदार मानिस थिए, आफूले गर्ने सबै काममा अत्यन्तै दक्ष थिए, र तिनी अत्यन्तै इमानदार पनि थिए। तिनले धेरै वाधाहरू भोगे। समाजसँग तिनको पहिलो सम्पर्क १४ वर्षको उमेरमा भयो, जुन बेला उनी विद्यालय भर्ना भए र सभाघर पनि गए। तिनमा धेरै जोश थियो र भेलाहरूमा सहभागी हुन तिनी सँधै इच्‍छुक थिए। त्यो समयमा, येशूले आधिकारिक रूपमा आफ्‍नो कार्यलाई सुरु गर्नुभएको थिएन; यो अनुग्रहको युगको सुरुवात मात्रै थियो। पत्रुस १४ वर्षका हुँदा धार्मिक व्यक्तित्वहरूको सम्पर्कमा आउन थालेका थिए; तिनी १८ वर्षको हुँदा धार्मिक विशिष्टहरूको सम्पर्कमा आइसकेका थिए, तर धर्मको दृश्य पछाडिको लथालिङ्ग अवस्थालाई देखिसकेपछि, तिनी यसबाट पछि हटे। यी मानिसहरू कति चलाक, धूर्त, र षड्यन्‍त्रकारी थिए भन्‍ने कुरा देखेपछि, तिनलाई अत्यन्तै घृणा लाग्यो (त्यो बेला तिनलाई सिद्ध पार्नको लागि पवित्र आत्माले यसरी काम गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई विशेष रूपमा प्रभाव पार्नुभयो र तिनीमाथि विशेष कार्य गर्नुभयो), त्यसकारण तिनी १८ वर्षको उमेरमा सभाघरबाट निस्किए। तिनका आमाबाबुले तिनलाई सताए र तिनलाई विश्‍वास गर्न दिएनन् (तिनीहरू दुष्ट र अविश्‍वासी थिए)। अन्तिममा, पत्रुसले घर छोडेर गए र दुई वर्षसम्‍म तिनी माछा मार्दै र प्रचार गर्दै जताततै हिँडिरहे, त्यो समयमा तिनले केही मानिसहरूलाई डोर्‍याए। अब पत्रुसले हिँडेको त्यही मार्गलाई तैँले स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्‍नुपर्छ। यदि तैँले पत्रुसको मार्गलाई स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्छस् भने, आज गरिने कामको बारेमा तँ निश्‍चित हुनेछस्, ताकि तैँले कुनै गुनासो गर्ने छैनस्, वा निष्क्रिय बस्ने छैनस्, वा कुनै कुराको तृष्णा गर्नेछैनस्। त्यो समयको पत्रुसको भावनालाई तैँले अनुभव गर्नुपर्छ: तिनी शोकले ग्रस्त थिए; तिनले भविष्य वा आशीषहरूको लागि अनुरोध गर्न छाडे। तिनले संसारमा लाभ, खुशी, ख्याति, वा सम्पत्तिको खोजी गरेनन्; तिनले सबैभन्दा अर्थपूण जीवन मात्रै जिउन खोजे, जुन परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्नु र आफूले सबैभन्दा बहुमूल्य ठानेको कुरा परमेश्‍वरलाई सुम्पनु थियो। त्यसपछि तिनी आफ्‍नो हृदयमा सन्तुष्ट हुन्थे। तिनले धेरै पटक येशूलाई यी शब्‍दहरूद्वारा प्रार्थना गर्थे: “प्रभु येशू ख्रीष्ट, एक पटक मैले तपाईंलाई प्रेम गरेँ, तर मैले तपाईंलाई साँचो रूपमा कहिल्यै प्रेम गरिन। तपाईंप्रति ममा विश्‍वास छ भनेर मैले भनेको भए तापनि, मैले तपाईंलाई साँचो हृदयले कहिल्यै प्रेम गरिन। मैले तपाईंलाई सराहना मात्र गरेँ, तपाईंलाई आदरपूर्वक प्रेम गरेँ, र तपाईंको याद गरेँ, तर मैले तपाईंलाई न त साँचो रूपमा कहिल्यै प्रेम गरेँ, नत तपाईंमा कहिल्यै साँचो विश्‍वास नै राखेँ।” संकल्प गर्नको लागि तिनले निरन्तर प्रार्थना गरे, र तिनी येशूको वचनद्वारा सँधै उत्साहित हुन्थे र तिनबाट उत्प्रेरणा लिन्थे। पछि, अनुभवको एक अवधिपछि, येशूले तिनलाई उहाँप्रति अझै तड्पिन बाध्य तुल्याउँदै तिनको जाँच गर्नुभयो। तिनले भने: “प्रभु येशू ख्रीष्ट! म कति धेरै तपाईंको याद गर्छु, र तपाईंलाई हेर्ने तृष्णा गर्छु। ममा धेरै कुराको कमी छ, र तपाईंको प्रेम जति म तपाईंलाई दिन सक्दिन। मलाई चाँडै नै लैजानुहोस् भनेर म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु। तपाईंलाई कहिले मेरो खाँचो पर्नेछ? तपाईंले मलाई कहिले लैजानुहुनेछ? कहिले फेरि मैले तपाईंको मुहार हेर्नेछु? यो शरीरमा जिउन, निरन्तर भ्रष्ट भइरहन म चाहन्‍नँ, नत अब उप्रान्त म विद्रोह नै गर्न चाहन्छु। सकेसम्‍म चाँडो मसँग भएको सबै कुरा तपाईंलाई समर्पित गर्न म तयार छु, र अब उप्रान्त म तपाईंलाई दुःखित तुल्याउन चाहन्‍नँ।” तिनले यसरी नै प्रार्थना गरे, तर येशूले तिनलाई सिद्ध पार्नुहुनेछ भन्‍ने बारेमा तिनलाई त्यो बेला थाहा थिएन। तिनको परीक्षाको वेदनाको बेला, येशू फेरि तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्‍नुभयो: “पत्रुस, म तँलाई सिद्ध बनाउन चाहन्छु, ताकि तँ एक फलको टुक्रा बन्छस्, जुन तँलाई मैले बनाएको सिद्धताको हिरा हुन्छ, र जसप्रति म आनन्दित हुनेछु। के तैँले मेरो लागि साँचो रूपमा गवाही दिन सक्छस्? के तैँले तँलाई मैले जे गर्न भनेको छु सो गरेको छस्? के मैले बोलेको वचनमा तँ बाँचेको छस? एक पटक तैँले मलाई प्रेम गरिस, तर तैँले मलाई प्रेम गरे पनि, के तैँले म भएर बाँचेको छस? तैँले मेरो लागि के गरेको छस्? तँ मेरो प्रेमको लागि अयोग्य छस् भन्‍ने कुरालाई तैँले पहिचान गरिस्, तर तैँले मेरो लागि के गरेको छस?” आफूले येशूको लागि केही पनि गरेको छैन भन्‍ने पत्रुसले देखे र आफ्‍नो जीवन परमेश्‍वरलाई दिन्छु भनी गरेको आफ्‍नो पहिलेको शपथलाई स्मरण गरे। अनि त्यसैले, तिनले फेरि गुनासो गरेनन्, त्यसपछिको तिनको प्रार्थना अझै उत्तम हुँदै गयो। तिनले यसो भन्दै प्रार्थना गरे: “प्रभु येशू ख्रीष्ट! एक पटक मैले तपाईंलाई छोडेँ, र तपाईंले पनि मलाई एक पटक छोड्नुभयो। हामीले एक-अर्काबाट अलग बसेर, अनि सँगै बसेर समय बिताएका छौं। तैपनि तपाईंले अरू सबैले भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले तपाईंको विरुद्धमा बारम्‍बार विद्रोह गरेको छु र तपाईंलाई बारम्‍बार दुःखी तुल्याएको छु। म यस्ता कुराहरूलाई कसरी बिर्सन सक्छु र? तपाईंले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कामलाई र तपाईंले मलाई सुम्पनुभएको कुरालाई म सँधै मनमा राख्छु र कहिल्यै बिर्सिँदिन। तपाईंले ममा गर्नुभएको कामको लागि मैले आफूले सकेजति सबै कुरा गरेको छु। मैले के गर्न सक्छु त्यो तपाईंलाई थाहा छ, र मैले कुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु त्यो पनि तपाईंले जान्‍नुहुन्छ। म तपाईंको योजनाबद्ध कार्यमा समर्पित हुन चाहन्छु, र मसँग भएको सबै कुरा तपाईंमा समर्पित गर्नेछु। मैले तपाईंको लागि के गर्न सक्छु त्यो तपाईंलाई मात्र थाहा छ। शैतानले मलाई धेरै झुक्‍काएको भए तापनि र मैले तपाईंको विरुद्ध विद्रोह गरेको भए तापनि, ती अपराधहरूका निम्ति मलाई तपाईंले याद गर्नुहुन्‍न र तिनीहरूको आधारमा तपाईंले मलाई व्यवहार गर्नुहुन्‍न भनी म विश्‍वास गर्छु। म मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईंमा नै समर्पित गर्न चाहन्छु। म केही कुरा पनि माग्दिन, नत मसँग अरू आशा वा योजना नै छ; तपाईंको अभिप्राय अनुसार काम गर्ने र तपाईंको इच्‍छा अनुसार गर्ने मात्रै मेरो इच्‍छा छ। तपाईंको तीतो कचौराबाट म पिउनेछु, र आज्ञा गर्नलाई म तपाईंकै हुँ।”